थाहा खबर: १६ प्रतिशत क्यान्सर बिरामी उपचारका लागि घरबार बेच्न बाध्य
काठमाडौं : नेपालमा १६ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीले घर जग्गा बेचेर उपचार गर्ने पाइएको छ। पाँच महिना लगाएर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको समन्वयमा एक्सन नेपाल नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो।
अनुसन्धानमा नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार हुने तीन ठूला अस्पताल बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर हस्पताल हरिसिद्धमा तेस्रो तहको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका १०३ जना बिरामीलाई सहभागी गराइएको थियो। उनीहरूमध्ये १६ प्रतिशतले खर्चको अभावमा घर जग्गा बेच्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
अनुसन्धानले नेपालमा एउटा क्यान्सरको बिरामीको उपचार खर्च ९ लाख ८१ हजार ३७० रुपैयाँ लाग्ने तथ्यसमेत बाहिर ल्याएको छ।
यस्तै अनुसन्धानले मुटु तथा रक्त नलीको उपचारमा एउटा बिरामीका लागि औपात ७ लाख ९० हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको पाइएको छ। मुटुरोगको उपचार हुने शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र नर्भिक अस्पतालमा गरिएको अनुसन्धानले सो तथ्य बाहिर ल्याएको हो।
अनुसन्धान कार्यको नेतृत्व गरेका डा. देवीप्रसाद प्रसाईंले कुल लागत खर्चमध्ये ६८ प्रतिशत औषधिमा खर्च हुने गरेको बताए।
एक्सन नेपाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र द यूनियनको सहकार्यमा भएको सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले लाग्ने मुटु तथा क्यान्सर रोग र यसको उपचारमा लाग्ने खर्चबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनीककरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्रसाईंले सूर्तीजन्य पदार्थको कारणले मुटु तथा क्यान्सरको उपचार भयावह अवस्था आएको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राडा. भगवान् कोइरालाले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई नै क्षति पुर्‍याउने भन्दै यसलाई सार्वजनिक रूपमै बहिस्कार गर्नुपर्ने बताए। सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न करको दर बढाउने, प्याकेटमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने, र सेवनकर्तालाई सामाजिक रूपमा नै बहिस्कार गर्नुपर्नु सुझाव दिए।
एक प्रसंगमा उनले कतिपय मन्त्रीले बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखाना ब्युँताउने खबर बेलाबेलामा उठाउने गरेको भन्दै यस्तो गल्ती नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ छातिरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोख्यानीले सूर्तीजन्य पदार्थबाट छाती तथा फोक्सोसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी भएको हुँदा यसको नियमन गर्नुपर्ने बताए। उनले गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, युवा कुनै पनि व्यक्तिलाई यसले असर गर्ने भएको हुँदा यस्ता वस्तु त्याग्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा द यूनियनका एसिया प्यासेफिक क्षेत्रका उपनिर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा बर्सेनि २५ देखि ३० हजार नेपालीको मृत्युको कारक सूर्तीजन्य पदार्थ भएको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारी अधिकारीहरूलाई सूर्ती रोज्ने की स्वास्थ्य रोज्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए।
'जनताको स्वास्थ्य हेरेर सूर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउछौँ'
यसैबीच कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो र समितिको तर्फबाट पूर्ण पहल गर्ने बताइन्। उनले आफू जनताको स्वास्थ्यमा अडिक रहेको भन्दै कानून बनाउँदा जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने बताइन्।
कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि आफ्नो समितिले पहल गर्ने बताए। 'मलाई पनि थाह थिएन अब मैले संसद र समितिमा यसबारेमा कुरा राख्नेछु' उनले भने।
महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति नीरु देवी पालले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कानुन बलियो भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको भन्दै यसमा कडाको आवश्यकता रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा सांसदहरु लेखराज भट्ट र अञ्जना विशंखेलगायतले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न आफूहरू लाग्ने बताए।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. जोश भेन्डरसले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले ज्यान लिने गरेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि करको दर बढाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालले सूर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मुटु तथा क्यान्सर रोगी बढाएको र यसको नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयन मा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए।